AHOANA FOMBA FAHATIAINANA ATAO AMIN'NY OLONA REHETRA: Fomba 10 hianarana hatoky olona - Fifandraisana
Ny tsirairay dia niaina fanaintainana sy ratra tamin'ny fotoana iray tamin'ny fiainany. Isika rehetra dia nahatsapa fa ny fahatokisana antsika dia voatohintohina, ary manontany tena izahay raha afaka hitoky indray.
Ireo traikefa ireo dia mety hanaintaina tokoa, ary ara-dalàna tanteraka ny fahatsapana.
Matahotra ny hatoky indray ianao noho ny tahotra ny fanaintainana amin'ny ho avy. Misy dikany izany….
famadihana ny olon-tiana dia mitondra fanaintainana matanjaka indrindra tsy takatry ny saina.
Na izany aza, ny fifampatokisana no fototry ny fifandraisana misy dikany rehetra, ary tsy afaka mandingana azy fotsiny ianao.
Ny vaovao tsara dia ianao afaka matokia indray.
Ny marina mampalahelo dia mety haratra ianao indray andro any.
Ny fahatokiana dia fanapahan-kevitra tsy maintsy raisinao amin'ny fahalalana fa tsy misy antoka azo antoka fa tsy hahatsapa toy izany intsony ianao amin'ny manaraka.
Ka noho izany ao an-tsainao dia mety manontany ianao hoe ahoana no ahafahanao mianatra matoky olona indray?
Tsotra izany. Ianao dia tokony ataovy ny safidy ary mitsambikina indray. Tsy maintsy mamela ny mpiambina anao ianao ary mamela ny tahotra.
Tsy mora izany, ary tsy hitranga mandritra ny alina. Mila miasa amin'izany ianao.
Ireto misy torohevitra azonao arahana mba hanampiana anao hisafidy ny hatoky indray aorian'ny traikefa maharary.
1. Raiso ny fahalemena
Ny fahalemena dia iray amin'ireo tanjanao lehibe indrindra.
Amin'ny maha olombelona antsika, dia mino isika fa miatrika risika be loatra amin'ny fametrahana ny tenantsika any ivelany sy mora tohina, fa ny mifanohitra amin'izay no tena izy.
Raha tsy mametraka ny tenanao any ivelany ianao ary miatrika risika, dia manjary tsy mahita zavatra betsaka ianao. Misafotofoto ny fiainana, saingy tsy maintsy atao mba hananana fiainana mendrika.
Ny fananganana rindrina fiarovana mba hiafina ao ambadika - raha ara-pihetseham-po - dia mety ho toa hevitra tsara, saingy ireo rindrina ireo dia tsy manavaka ny fahatsapana tsara sy ny ratsy.
Ny fiainana azo antoka fa afaka amin'ny famadihana dia azo antoka koa fa afaka amin'ny fitiavana. fITIAVANA dia misafidy ny hatoky olona amin'ny fonao.
Azonao atao ny mizatra mampiseho ny fahalemen'ny fihetseham-ponao amin'ny toerana azo antoka. Miresaha amin'ny olona akaiky anao na namana akaiky ary aza misalasala miresaka amin'izy ireo momba ny zavatra tsapanao.
Mety hatoky tanteraka azy ireo ianao, fa ny hetsika fanokafana dia mampiseho izany amin'ny fomba tena izy ary manamafy ny finoana ao an-tsainao fa ny fahatokisana dia zavatra tsara.
roa. Mianara mitoky amin'ny tenanao
Raha te hatoky olona hafa ianao dia tsy maintsy matoky ny tenanao aloha. Matokia ny fahaizanao mitsara sy ny fahafahanao manao safidy tsara.
Tsy hoe rehefa nandratra anao ny olon-tianao dia tsy midika akory izany hoe tsy mahay mitsara ianao, na hoe nanao fahadisoana ianao tamin'ny famelana azy ireo hiditra.
Mahery vaika ny toe-tsainao, ary tsy tokony hisalasala ny amin'ny tenanao ianao miorina amin'io zavatra niainana iray io. Tandremo ny toe-tsainao ary matokia ny tenanao anio, rahampitso ary isan'andro.
Ny fampihetseham-batana tsara hanandramana raha te hamerina ny fahatokisan-tena amin'ny tenanao ianao dia ny fijerena ny fanapahan-kevitra rehetra noraisinao izay nisy vokany tsara.
Atombohy amin'ny safidinao ny hamaranana zavatra miaraka amin'ilay olona nanimba ny fitokisanao. Raha fantatrao fa tsy ho afaka hatoky azy ireo intsony ianao, ny famelana ny fifandraisana no tena fanapahan-kevitra mety.
Ary jereo ny fiainanao midadasika sy ireo zavatra rehetra mandeha tsara ao aminy. Azo antoka fa nanao safidy lehibe maro ianao izay nisy vokany tsara.
Safidy ara-bola tsara, safidy ara-pahasalamana tsara, safidy ara-pahasalamana tsara, safidy finamanana tsara - manaova lisitra ary ampahatsiahivo ny tenanao hoe matanjaka ny fonao.
3. Safidio ny hamela heloka
Zava-dehibe ny famelan-keloka. Mety tsy voatery hisafidy ny hamela ny heloky ny olona nandratra anao ianao (na dia mety ho fitsaboana ara-pahasalamana aza izany), fa farafaharatsiny mamelà ny tenanao .
Ara-dalàna raha manome tsiny ny tenanao satria mamela olona handratra anao. Mety hieritreritra ianao fa vendrana ianao namela izany na tokony ho nahalala bebe kokoa.
Tadidio fa be herim-po ianao sokafy ny tenanao ho mora tohina amin'ny voalohany. Tsy omena tsiny ianao noho ny fihetsiky ny hafa.
Niasa tamina fikasana tsara indrindra ianao. Notazominao ny fifaranan'ny fifampiraharahana.
Azo antoka fa mety tsy nifanaraka tamin'ny namanao ianao ary nahasosotra azy ireo indraindray, saingy tsy mendrika ny hahafoana ny fitokisanao ianao.
Tsy misy fifandraisana tonga lafatra. Nanao izay vitanao ianao mba hampandeha ny asanao. Aza miteny amin'ny tenanao raha tsy izany.
Mamelà ny helokao.
4. Avelao ny fotoana hijaly
Eny, ny fandratran'ny olona iray dia mitaky anao handia ilay fizotran'ny alahelo.
Malahelo ny fifandraisana nifaneraseranao tamin'io olona io ianao. Mampalahelo ilay olona noheverinao ho fantatrao ianao, nefa nivadika ho olona hafa.
Malahelo ny fiainana nanananao sy ny fiainana noeritreretinao hananana azy ireo amin'ny ho avy ianao.
Matetika ny alahelo dia misy ity manaraka ity Dingana 5 : fandavana, fahatezerana, fifampiraharahana, famoizam-po, ary fanekena farany.
Aza miady amin'ireo dingana rehetra ireo satria voajanahary sy manan-danja izy ireo.
5. Aza manohy manisy marika ny tenanao hoe ilay niharam-boina
Tena mora ny mahatsapa alahelo ho an'ny tenanao aorian'ny maratra. Na dia mety mila iray na roa andro aza ianao hijanonana eo am-pandriana hihinana gilasy ary hitomany amin'ny tantaram-pitiavana mampalahelo amin'ny fahitalavitra, andramo fonosina haingana izany.
Tsy hanampy anao hiala amin'ny fanaintainana izany.
Aza avela hilentika amin'ny fanindronan'ny famadihana. Raha mifantoka tanteraka amin'ny fanomezana tsiny ilay olona voarohirohy ianao, dia ataonao izay iharan'izany.
Ary, eny, izy ireo dia mety nihetsika tamin'ny fomba nandratra anao sy nanimba ny fitokisanao, saingy izany rehetra izany dia eo aminao - tsy ianao.
Ianao dia tsy ny iharam-boina Ianao dia tsy ny iharam-boina Ianao dia tsy ny iharam-boina
Raha avelanao hanao izany, ny toe-tsain'ny olona iharan'izany dia mety hanenika ny faritra rehetra amin'ny fiainanao. Afaka mandroba ny fahatokisanao tena sy ny fahamendrehanao izany.
Te hanome ilay karazan-kery hafa aminao ve ianao na dia efa tsy eo amin'ny fiainanao intsony aza izany?
Miezaha handresy azy io. Eny, afaka mandresy izany ianao. Manana fifehezana bebe kokoa noho ny noeritreretinao ianao. Omeo voninahitra ny tenanao.
iSIKA tena mamporisika anao hanandrana hypnosis tsotra mitarika ity satria mety ho mandaitra be amin'ny fanampiana hanovana ny toe-tsainao hiverina amin'ny zavatra tsara.
Ny dingana manaraka dia ny…
6. Ataovy avo ny zavatra antenainao
Satria fotsiny ianao naratra olon-tianao dia tsy mila mampihena ny zavatra antenainao amin'ny ho avy.
Raha ny marina dia tokony hitandrina ny zavatra antenainao ihany ianao na hampiakatra ny bara mihitsy aza!
skylar diggins sy lil wayne nanambady
Aza manaiky famitahana na tsy fivadihana amin'ny ho avy satria lasa tsy mahalala na inona na inona ianao, mieritreritra fa mendrika izany, na mihevitra azy ho ampahany amin'ny fifandraisana rehetra.
Ataovy mazava tsara amin'ny mpiara-miasa amin'ny ho avy ny fahitanao ny fitokisana ary ampahafantaro azy ireo fa tsy hahazaka ny fahatapahana izany fahatokisana izany ianao.
7. Avelao ao ivohonao ny lasa
Fantaro fa ny lasa taloha dia tsy mitovy amin'ny hoavinao. Ny fitondran-tena ratsy ataon'ny olona iray dia tsy taratry ny zanak'olombelona rehetra.
Na dia hendry aza ny misoroka ireo karazan'olona sy toe-javatra nanitsakitsahana ny fitokisanao azy, dia tsy tokony havelanao handoto ny zavatra antenainao amin'ny ho avy mihitsy ny zavatra niainanao taloha.
Diniho ny fitondran-tenanao ary miambena hatrany amin'ny famantarana fa mety misy fiatraikany amin'ny fomba fandraisanao olona ankehitriny ny lasa.
Aza asehoy ny fihetseham-ponao ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo mpiara-miasa vaovao mety ho anao na raha tsy izany dia mety hamaky zavatra amin'ny fitondrantenany izay tsy misy ianao.
Aza adino: mendrika hitia olona ianao ary mendrika ny fitokisanao.
8. Diniho ny safidy
Mieritrereta iray minitra momba ny fiainana tsy misy fitiavana sy fiarahana. Tsy dia manintona tokoa, sa tsy izany?
Angamba ny antony tsara hianaranao matoky olona indray dia satria ratsy kokoa ny safidy. Raha tsy misy fifandraisana misy dikany dia very ny hazavany sy ny famirapiratany ny fiainana.
Miandrasa mandritra ny 30 taona ary alao sary an-tsaina ny tenanao irery ary mbola mifamahofaho miaraka amin'ny olan'ny fitokisana. Diniho ny olona rehetra izay mety ho tonga sy nandalo nandritra io fotoana io, ary ireo izay nijanona raha mba nomenao fotoana izy ireo.
Izany dia hanampy anao hanaiky fa ny mety hisian'ny fitiavana dia mendrika ny mety hitrangan'ny alahelo. Raha ny marina, ny mizana dia tsy voalanjalanja lavitra akory - ampidirina mafy ho amin'ny fitiavana izy ireo.
9. Diniho izay rehetra mety hitranga amin'ny ho avy
Azo antoka fa tianao ilay olona farany. Saingy mazava fa ny drafitra dia manana drafitra hafa ho anao.
Mety ho sarotra aminao ny mieritreritra izao, fa misy olona any ho any izay tsara kokoa ho anao.
Mifantoha amin'ny olona hihaonanao amin'ny ho avy. Angamba nifarana ny fifandraisana iray mba hahafahan'ny hafa manomboka.
Alao an-tsaina ange ny voalohany rehetra izay ho avy: ny fotoana voalohany nijerenao olona, ​​ny teny voalohany, ny lolo voalohany, ny oroka voalohany, ny fotoana voalohany tsapanao milatsaka amin'izy ireo ianao .
Avelao ny tenanao ho faly amin'ireo voalohany ireo. Ny fientanam-po dia tonika mahomby amin'ny tahotra. Hamafa ny tahotra izany ary hameno anao fanantenana ary fanantenana fa misy olona miavaka miandry anao hihaona amin'izy ireo.
Ny fientanam-po dia handrisika anao hanaiky ny mety isaky ny fotoana ary hamela anao hamela olon-kafa hanakaiky.
Raha misafidy ny tsy hatoky intsony ianao dia mety hanjary tsy hahita olona tena mampino. Araka ny ataontsika rehetra, indray andro any ianao hijery any aoriana ary hahafantatra fa misy ny antony ny zava-nitranga.
10. Lazao ny tantaranao
Indray andro, rehefa mahita an'io olona lavorary io ianao ary mahatsapa fa vonona ny hatoky azy ireo dia alao antoka fa mifampiresaka ampahibemaso ianao momba ny zavatra niainanao taloha sy ny tahotra ny ratram-po amin'ny ho avy.
Tsy hoe mahasalama ny mifampiresaka am-pahamendrehana amin'ny fiandohan'ny fifandraisana vaovao, fa mety ho hitanao ihany koa fa ny olona vaovao dia manana tantara sy tahotra mitovy amin'izany.
Ny fianarana ho marefo sy matoky indray aorian'ny fanaintainana lalina dia mety hahatsapa fa tsy ho vita mihitsy indraindray. Mety hieritreritra ianao fa tsara kokoa ny mijanona irery miaraka amin'ilay olona tokana azonao itokisana (ny tenanao).
Na izany aza, zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny fiainana misy kalitao. Raha tsy nisy ny fotoan-tsarotra dia tsy ho afaka hankasitraka ny fotoana mahafinaritra mihitsy isika. Ka tsara indrindra raha mifidy mijanona misokatra sy hatoky na dia efa namadika sy nandratra aza ianao.
Ny fitiavana dia mety hitarika fanaintainana mafy indrindra azo atao, fa io koa dia mety ho zavatra lehibe indrindra hatrehanao. Rehefa dinihina tokoa, tsy nisy nilaza fa ho mora ny fitiavana.
Mbola tsy azonao antoka ny fomba hatoky olona indray? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Famantarana 3 momba ny fitokisana ary ny fomba hivoahana amin'izy ireo
Fomba 8 mampidi-doza amin'ny lainga ny lainga
Alohan'ny mampiaraka dia ataovy izay hahazoana antoka fa misy amin'ireo fomba 8 ireo
10 Famantarana marimarina ny sakaizanao dia mety hamitaka anao
tokony hampiaraka amin'ny olona tsy tiako ve aho
ny fomba hiatrehana olona iray manana olan'ny fandaozana
tena tsy tia ahy intsony ve izy
maninona ny lehilahy no misintona rehefa raiki-pitia izy ireo